Imephu yeBentley XM vrs. IJografi V8 -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Bentley Imephu XM vrs. Geographics V8
Bentley Imephu XM vrs. Geographics V8
Kwiposti yangaphambili ndiyikhankanyile umbono wokuqala yeyiphi iMaphu eyi-XNUMX, ngoku ndingathanda ukuhlalutya ukufana ukuze abasebenzisi ababesazi iGeographics baphulukane nokoyika.
Ukuba bendizii-Bentley Systems, bendiya kufuna ukufaka iqela kwizicelo ze-geospatial, kuba kubonakala ngathi nangona izixhobo zisomelele kakhulu, loo mkhwa wokujoliswa "kumsebenzisi osaziyo" endaweni yokuba "ngumsebenzisi owenza i-GIS" uyaqhubeka. Nangona sisazi ukuba iBentley igcina umgaqo-nkqubo wayo wokufikelela kwiBentleyMap kubasebenzisi bayo boBunjineli obubekwe kakuhle kubo ... kuyakubiza iindleko ukukhula xa kuthelekiswa nabakhuphisana bayo abomeleleyo beGeospatial. Okwangoku, ezinye iinguqulelo zeapps zilungile, kodwa ndiyanyanzelisa, ziyaqhubeka nokusasaza abakhohlakeleyo.
Ukuhlalutya ukufana okufanayo siza kudibanisa usetyenziso lweMaphu yePortfolio kwiindima ezine, kwaye njengoko sibhala siya kubeka ii-hyperlink:
1. Ukwakhiwa komzobo
Yenza uphinde uhlele iimpawu kwizinto ze-vector
Hlaziya kwaye uhlele kwisiseko sedatha
Ngenisa idatha evela kwiArcGIS kunye nezinye
Ukwakhiwa kwegridi yejodetic
Ukuveliswa kweemephu zokuprinta
2. Uhlalutyo lomhlaba
Unxibelelwano kunye neArcGIS kunye nabanye
Unxibelelwano neGoogle Earth kunye nabanye
3. Ukwakhiwa kwengqondo
Inkcazo yamanqanaba kunye neempawu
4. Uphuhliso Lokutshaya
Unxibelelwano noMshicileli weWebhu ye-Geo
Unxibelelwano kunye neProjekthi yesilumko
Unxibelelwano kunye ne-SDE / MXD
Ngokuthatha inyani yokuba ndiza kube ndihambahamba, siza kujonga kwimephu ye-Bentley, okwangoku, makhe sijonge icandelo lokuqala:
Kule nto yayiyenye yeenzuzo ezilungileyo zeMicrostation Geographics ngoku iBentley Imephu xa kuthelekiswa nabantu abakhuphisana nabo ngokuba nazo zonke izixhobo zokwakha zeCAD zeMicrostation kwaye bangabulali ikhompyuter kusetyenziso lwezixhobo xa besenza iinkqubo ezinkulu okanye bephatha imifanekiso. Makhe sibone ukuba zitshintshe njani ezi zixhobo ngaphakathi kwiimenyu.
Phambili: "Izixhobo / ijiografikhi / ukudalwa komhlaba"
Ngoku: "Izixhobo / geospatial "I-Topology"
Ukuyilwa kwemilo, ukudalwa kwe-centroid, ukufunyanwa kwe-centroid / umda / umdibaniso kunye nendawo yokuqinisekisa yendawo / ye-centroid
Bayisusile kule bar into edibanisa izinto ngokusondela, ithunyelwe kwipaneli yokucoca indawo
Kwakhona akusekho injini yokukhangela ye-super bug (slivers), ebeluncedo ekufumaneni iimpazamo ze-splice phakathi kweemephu okanye nokwenza izinto ezivela kwizinto eziphakamileyo, ezinjengezitrato.
kwaye imaski yokubonisa eefayilithi esebenze kakuhle ukufumana iimpazamo zonikezelo lwezinto okanye izinto ezingafakwanga isusiwe, ngoku ikwi "izixhobo / izixhobo / izixhobo zokwenza izinto"
Ngokumangalisayo, umyili we-buffers ubonakala ekwisixhobo esifanayo sokuqinisekisa kodwa oku kusanemiqathango kwiicingo.
Phambili: "Izixhobo / ijiografi / ukucoceka kweetology"
Ngoku: "Izixhobo / geospatial ukucoca ityhubhu
Apha yonke into ihlala ifana, ngokuthetha into yokuba izixhobo zokudibanisa izinto ngokusondela kunye ne-bug yokukhangela ezazikade zikho kwindawo yokudala yathunyelwa kule bar.
Ukucoca kwe-Dialog iqhubeka isebenza ngendlela efanayo ngokusebenzisa i-Keyin, ngoko siya kuqhubeka nokukhetha oko kwezi zixhobo
Bayishenxisile le iphaneli yomboniso kumnyama, ebithunyelwe "kwezixhobo / geospatial / izixhobo"
Bentley Systems Umhlaba ka-Google
I-Bentley Imephu XM, ukuqala kokuqala
I-Agenda yeNkomfa ye-BE 2008 kwi-Geospatial
Well ukuqonda yonke atunso, kodwa deberedas kwakhona ndawo, njengoko Zacatecas este1 kwiindawo 13 14.Si kunye nayiphi imidlalo indawo ulindele, i Fanica indlela ukuphanda ngubani tomf3 data, njengoko podreda baye baba kahle zobuxoki oku kuthetha ukuba ithe cwaka engundoqo ye x = 500,000 na ukuhamba.
Omnye usebenzisa iinguqulelo kule ngongoma iyamangalisa.
Kubonakala kum ukuba abalinganiswa abakhethiweyo abanako ukusetyenziswa apho.
Nceda, ungandixelela indlela yokubhala unobumba "ñ" ngefonti yamaRoma kwi-MicroStation J
Hamba uye phambili kwaye ndiyathemba ukuba wenze isigqibo esiphezulu nesiphumeleleyo kwishishini lakho.
Ndiyabulela zakho izimvo!
I-advantage endinayo lixesha, kule nto undixelele yona, isisombululo sicacile kuthi. Ukudala nokuhlela "iiGISes", sele sinesixhobo esihle kakhulu sokudweba kwaye sinomyalelo olungileyo, iMicrostation (ngenkxaso yeGeographics, kwi-topology, njl njl). Ndiyakholelwa ukuba ukukhululeka okuvezwa yi-ArcGIS kuya kuba yintloko yenaliti yokuzalisa idatha kunye nokuxhaphazwa okulandelayo kwe-GIS. Ubuncinane ekuqaleni. Kwaye ekuhambeni kwexesha siya kusebenzisa i-Bentley Map (nangona ixesha inguqu entsha ye-Microstation ingafika ...) ngokukodwa kwindlela ye-Geoengineering (i-hydraulics kunye nokudibanisa ne-InRoads), kodwa kuya kuthatha ixesha ukudala konke. loo mesh.
Sawubona, ndinomlinganiselo wokwaneliseka nge-Bentley Imephu, ebonisa xa ndithethile ngeenzuzo zayo, nangona kunjalo ndimele ndinyanisekile kule nto kwaye ndibe ndixa ndathetha ngobuthathaka babo.
Kuninzi ekuqondeni uhlobo lomsebenzisi we-Bentley, i-Geographics yayisisixhobo esigxininise kwi-geospatial kubasebenzisi bobunjineli abafuna ukwenza i-GIS, oko kuthetha ukuba bathatha ithuba loyilo lwemisebenzi ehambelanayo, i-hydraulics, i-Project Wise, izakhiwo, i-architecture kunye nayo yonke into eyenziwa yi-Bentley kunye ne-ArcGIS engayenzi. Yiyo loo nto umgca ubizwa ngokuba yiGeoengineering. I-ESRI yi-GIS kwi-purest yayo, kunye nezandiso okanye izicelo zomntu kumasebe ahlukeneyo e-cartography (kunye nezinye iindawo), kodwa rhoqo kunye nendlela ye-GIS; Forte yakhe kuhlalutyo kunye noshicilelo, kuba Bentley ayimgqithi.
Ngoko kuya kufuneka ubhale umehluko apho uya khona, ngaba uya kwenza ukudibanisa kunye nezicelo zobunjineli, okanye uya kusebenzisa ibhodi yokudweba i-Microstation? Kwaye andikucebisi ukuba uqhubeke ubambelele kwiJografi, kuba sisixhobo esiya kuthi singasetyenziswa nangona siya kuqhubeka sisebenza kwinto esiyenzileyo (kunye neyenzayo). IJografi ayivumeli izinto ezilula njengejometri ezintsonkothileyo (iipasile ezinemingxuma), ngaphandle kokuba wenze iiseli okanye iimilo ezintsonkothileyo kwaye wenze uhlalutyo lwendawo ngaloo nto "kukusika imithambo yakho", kwaye ke inemida yokuphatha izinto ezingafihliyo okanye incasa elungileyo yoshicilelo. .
Bentley Imephu kusonjululwa izinto ezinjengezi (kwaye abaninzi nangaphezulu) kodwa abasuka Geographics ukuya Bentley Map inefuthe olomeleleyo, njengokuba kwaba usuku ukuya ArcGIS ArcView 3x 9x.
Imephu yeBentley ayinakuqalwa ngencwadana elula yomsebenzisi (ngelishwa), kuba i-geofumed kakhulu. Thatha inkxaso ekhethekileyo ukwenza izinto ezilula ngokufanelekileyo (okokuqala), njengeeprojekthi zokwakha ukuba umsebenzisi akazange ayenze ngeJografi. Ukongeza, ukufumana abasebenzi ukuba basebenzise isixhobo (i-Bentley Map) akunakwenzeka ngokoqobo kumazwe ebesithetha nawo.
Kwaye kule nto, i-ArcGIS ikubetha ngokulula ukwenza izinto ezilula (uhlalutyo, ukuprinta, iingxelo, uxhulumaniso kwi-database, njl.). Anditsho ukuba awunakuyenza ngeBentley Map, ungenza imimangaliso ngenene, kodwa ukwenza izinto ofuna ukuzibonisa ngexesha elifutshane… kuthatha ubuchule besixhobo.
Kwaye ukuba uthetha ukwakha ii-geodatabase zobuqu okanye iiprojekthi ezisekwe kwi-mxd, ndibona eyona ndlela yakho ingcono yi-ArcGIS. Ukuphuhlisa kunzima kuzo zombini izixhobo kodwa ndiyabona ukuba ayingomdla wakho lo. Kuya kufuneka ukutyalomali ixesha kunye noqeqesho lwabasebenzi malunga nokwakhiwa kwedatha, kuba nangona sele kuninzi, awunayo yonke into oyenzayo ngeprogram yeCAD. Kwakhona ukuba unamalayisensi e-Microstation, akukubi ukwakha i-topology eyinkimbinkimbi kwi-dgn kwaye uyingenise kwi-ArcMap ngelixa ufumanisa amaqhinga okwakhiwa kwedatha ye-vector.
Kwaye ekugqibeleni, ngokwemigangatho yokuzinzileyo kunye neenzuzo, uya kufuna ukufumana abantu abaya ku-ArcGIS, kwaye kulula kakhulu.
Ndicinga ukuba kufanelekile ukuthengisa amagcisa apho kuthathwa khona imodeli yeshishini, ukunqanda ukungavumelani notshintsho; Zizonke ezenza ukuba inkampani yakho iphumelele kwaye ilahlekelwe ... kubuhlungu.
Ndiyathemba ukuba andiyikushiya ngaphezulu ilahlekile.
Ndisebenza eParc Agrari del Baix Llobregat:
Njengoko ubona kwikhonkco, indawo engqongileyo yenkampani yam kulawulo lwendawo (ethetha ngokuthe ngqo). Ingongoma kukuba bebesoloko besebenzisa iMicrostation njengesixhobo sokudweba iCAD (kunye nazo zonke iingenelo zayo!) Kodwa ukwakhiwa kweprojekthi yeGIS lulwimi oluhamba ngaphaya komnqweno, ixesha kunye nenzuzo enokufumaneka kuyo.xa uthelekisa kodwa njengoko utsho ngokufanelekileyo, uloyiko lwam aluloxabiso lesoftware, akuyongxaki (enyanisweni, inkqubo sele ikhona), uqeqesho lwezixhobo sele luqalile… kwaye thina kwalile ukuphuhlisa izisombululo ezilungiselelwe wena (ngaphandle kokuba yimeko egqithisileyo…).
Umbuzo wam omkhulu ngowokuba imephu ye-bentley inokukhuphisana kwinqanaba lokudala iiprojekthi ngokulula kwe-arcgis? okoko abasebenzisi bangoku bayayazi imeko yeMicrostation, (kodwa hayi kwinqanaba lokudalwa kweeprojekthi zejografi, njl ... kodwa kwinqanaba lomsebenzisi) endicinga ukuba linokubanjiswa ngokulula. Ngaphezulu kwayo nantoni na, ndingathanda ukujongana ndisebenzisa imephu ye-bentley kwiplagi ene-arcgis.
Ndiyathemba ukuba ngale nto ungandinceda ndenze isigqibo ... ndiza kuzama ukufumana idemo yeMephu yeBentley ...
Hayi! kwaye ndikubulele!
Kunzima ukukunika iingcebiso ezinjalo nge-stroke ngaphandle kokwazi indawo yenkampani yakho. Kwenzeka okufanayo nakwezinye iinkqubo, abasebenzisi xa sele besetyenziselwa ukusebenza ngesixhobo esinye abafuni ukufudukela kwelinye kwaye ndicinga ukuba ngabasebenzisi be-Microstation Geographics bavuya kakhulu ngokukhululeka kokwakhiwa kweCAD kunye nokuphathwa kweempawu. Akunjalo kakhulu kusetyenziso olunikezelwa kwinqanaba lokuhlalutya, ukubonwa okanye ukupapashwa.
Ezi zinto (ezithandayo) zinokuthi zenziwe ngeArgGis, kodwa akuzange kube lula ngokunikezelwa yinkqubo ye-CAD, kodwa kufuneka sivume ukuba i-Geographics ineemida zayo ngokwezinye i-GIS.
Ukuba bendinokuthelekisa i-ArcGIS ne-Bentley Map… kuxhomekeke kwinto oza kuyisebenzisela yona. Ukuba usixelela ngakumbi malunga nokuba liliphi ishishini lakho, yeyiphi indawo abathengi bakho kwaye bacinga ukukhula phi, ke zombini izisombululo zinamandla kwaye kufuneka ulinganise ukuba uloyiko lwakho ngamaxabiso esoftware okanye iindleko ezibandakanyekayo ekwenzeni isoftware. kwisixhobo okanye ukuphuhlisa izisombululo isiko… ukuba kuzo zombini iimeko kuya kufuneka utyale imali nokuba uya kwi-ArcGIS okanye kwi-Bentley Map.
Molo, ndingathanda ukubuza umbuzo malunga neBentley Imephu (sisebenze neMS Geographics, kodwa kunjalo ukuyisebenzisa njenge-gis ayisebenzi kakhulu, kunzima ukuseta iiprojekthi, ukwazi i-VBA kwinkqubo ... nakwinkampani siqala ukufudukela kwiArcGIS, kodwa Abasebenzi baqhelene nokusebenza ne-MS nangona zimbalwa iiprojekthi zobunjineli, kwaye sinikezela ngaphezulu, nangona kuncinci ngenxa yobunzima, ekusebenziseni i-GIS.Sifuna ukusebenzisa i-ArcGIS, kodwa abasebenzi bayathandabuza ukutshintsha ukuze kube lula ukuzoba MS…): Luya kuba yintoni uluvo lwakho xa uthelekisa iBentley Imephu neArcGIS? Ndizifundile izithuba kwaye ndibukele iividiyo zedemo… kodwa andiyithembi iBentley… ingaba iyasebenza ngokulula ekudaleni, ekuhlaziyweni, ekusetyenzisweni komhlaba okanye… Ngaba yinto yokwenene?
Ndiyabulela iblogi yakho! kunye nempendulo yakho !!
Khangela uphinde usetyenzise ukusebenzisa amazwi avamile: i-Microstation